Waa maxay sababta ay Barcelona kalsoonida badan ugu qabto iney kooxaha kale kaga adkaan karto saxiixa Marcus Rashford? – Gool FM
Waa maxay sababta ay Barcelona kalsoonida badan ugu qabto iney kooxaha kale kaga adkaan karto saxiixa Marcus Rashford?
Abdirashid Mohamud June 8, 2019
(Barcelona) 08 June 2019. Barcelona ayaa dhigeeda Manchester United usoo bandhigeysa rabitaankeeda ku aadan xiddiga da’da yar Marcus Rashford, iyadoo tababare Ernesto Valverde uu aad u doonayo inuu xiddigaan ka dhinac ciyaarsiiyo Lionel Messi & Luis Suarez.
Rashford kaliya hal sano ayaa kaga haray qandaraaskiisa, walina qalinka kuma duugin heshiis cusub oo kooxda ay usoo bandhigtay isla markaana uu todobaadkii ku qaadanayo 150,000 kun oo Pound.
Kooxda ka dhisan Old Trafford waxey fursadu heysataa iney sanad dheeri ah ku darto heshiiskiisa, balse kooxaha Real Madrid, Paris Saint Germain iyo Juventus ayaa si aad ah u qiimeynaya xaaladda xiddigaan.
Si kastaba wargeyska Sport ee laga leeyahay Catalonia ayaa qiraya in Barcelona ay 21-jirkaan reer England u aragto inuu yahay mid aad ugu haboon kooxdooda, sidoo kalana wargeyska wuxuu qiray in kooxda La Liga difaacaneysa ay horay dalab uga gudbisay xiddigaan balse laga soo diiday.
Hal sabab ayaa jirta taasoo keentay in Balaugrana ay mar walba aaminto iney kooxaha kale kaga dhawdahay saxiixa Marcus Rashford waana xiriirka dhaw ee ka dhaxeeya madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu iyo sidoo kale guddoonka sare United Ed Woodward.
Marcus wuxuu dhaliyay 45-gool tan iyo markii uu 2016 lasoo baxay geesinimada uu hadda garoomada ku joogo, halka uu fasalkii lasoo dhaafay 13-gool kooxdiisa u dhaliyay.
Jesus Navas oo goolkiisii iyo guushii Faroe Islands u kala hibeeyay laba shaqsi oo kala duwan.
Maurizio Sarri oo agabkii gurigiisa dib ugu celiyay talyaaniga & waqtiga lagu dhawaaqi doono heshiiskiisa Juventus.